Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Barlamaanka Somaaliya oo Magaaladda Godey lagu soo dhaweyey – Radio Daljir
Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Barlamaanka Somaaliya oo Magaaladda Godey lagu soo dhaweyey
Nofeembar 5, 2019 2:59 g 0
Magaalada Godey ee dhulka Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa Maanta garaay oo lagu soo dhaweeyey Xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaannada ayaa waxaa ay kala yihiin Sanoter Axmed Xaashi iyo Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi,waxana u jeedka safarkooda lagu sheegay ka qeyb-galka shirka Jabhadda Xoreynta Soomaali Galbeed ee ONLF oo halkaas ka furmaya.
Xubnaha ka socda Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa Magaalada Godeey kusoo dhaweeyey Xubno Sare sare oo katirsan Ururka ONLF oo uu kamid yahay Afhayeenka Jabhadda Cadaani Hirmooge iyo Cabdi Kariin Qalbi-Dhagax.
Horay ayaa dowladda Soomaaliya waxaa ay dowladda Itoobiya u gacan gelisay Cabdi Kariin Muuse Qalbi Dhagax oo katirsan Saraakiisha Jabhadda ONLF wallow lagu siidaayey cafis uu u fidiyey Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed,kadib heshiis dhex-maray ONLF iyo Dowladda Itoobiya.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 203 Wararka 19715
Golaha Aqalka Sare oo kulan muhiim ah Muqdisho ku yeeshay